गर्मी को4सबैभन्दा खतरनाक खाना | बेजिया
गर्मी को4सबैभन्दा खतरनाक खाना
Toñy Torres | 21/07/2021 23:55 | स्वास्थ्य सल्लाहहरू
केही खाद्य पदार्थहरू गर्मी र सानाeको लागी खतरनाक हुन्छन् हानिरहित निरीक्षणले गम्भीर स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ। गर्मी को उच्च तापक्रम जीवाणु, फ fun्गी र खाना को दूषित विभिन्न कीटाणु को प्रसार को कारण हो। परिणामको साथ जब शरीरको साथ सम्पर्कमा रहदा, तिनीहरू गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ जस्तै खाना विषाक्तता।
निस्सन्देह ज्ञात कुरा केहि र एक नियमको रूपमा, यो सलाखाहरूमा खानाको उपभोगसँग सम्बन्धित छ, रेस्टुरेन्ट र ठाउँहरू जहाँ खानेकुरा दिइन्छ। जहाँसम्म, अध्ययन र तथ्या .्कले संकेत गर्दछ कि गर्मीमा खाना विषाक्तताको अधिकांश भाग घरेलु वातावरणमा हुन्छ। जसले देखाउँदछ कि आवश्यक हेरचाह घरमा खानाको साथ लिइएको छैन।
1 गर्मी को समयमा सम्भावित खतरनाक खाना को सूची
1.2 अण्डा-आधारित उत्पादनहरू
1.3 भुटेको आलु
गर्मी को समयमा सम्भावित खतरनाक खाना को सूची
ग्रीष्म dangerousतुमा तिनीहरू अधिक खतरनाक हुन्छन् भन्ने मतलब तिनीहरू जाडोमा हुँदैन। त्यो हो, धेरै खराब खण्डमा खाएको खाना खराबीको नराम्रा परिणामको रूपमा हो। उच्च तापक्रमले प्रक्रियालाई छिटो गर्दछ, तर जाडोको चिसोले यसलाई रोक्दैन। तसर्थ, सबै भन्दा सल्लाहकार कुरा भनेको खानालाई ह्यान्डल गर्दा सधैं अधिकतम सावधानी अपनाउनु हो।
को लागी गर्मी को जोखिमकेही खानाहरू अधिक खतरनाक हुन्छन् किनकि ती त गर्मी duringतुमा बढी खपत हुन्छन्। ताजा मासुहरू जुन बार्बेक्युमा खाइन्छन् र खाना पकाउनु अघि गर्मीमा धेरै समय खर्च गर्दछन्, राम्रोसँग फ्रिज गरिएको होममेड मेयोनेजसहित सलादहरू केही खास उदाहरणहरू हुन्। तर गर्मी को समयमा खतरनाक खाना को सूची लामो छ, यी4खाद्य पदार्थहरू हुन् जुन सब भन्दा बढी जोखिम बोक्छ.
ह्यामबर्गरहरू तयार पार्न प्रयोग गरिएको मासु धेरै जनावरहरूका प्रजातिहरूको मिश्रण हो, सामान्यतया अज्ञात। बिभिन्न जनावरहरूसँग व्यवहार गर्दा जोखिम एक जनावरको कटलट वा मासुको टुक्रा भन्दा ह्यामबर्गरमा बढी हुन्छ। अर्कोतर्फ, किन्मालेको मासुमा धेरै कोठा र क्र्यानहरू हुन्छन् जहाँ ब्याक्टेरिया बढ्न सक्छन् र तातो को लागी सबै टुक्रा समान रूपमा पुग्न अधिक जटिल छ।
त्यो बिर्सनु हुँदैन गर्मी बारबेक्यूको तारा नै ह्यामबर्गर हो। तसर्थ, यो मासु पकाउनको क्षण सम्म चिसो राख्न आवश्यक छ। कोल्ड चेनलाई तोडे बिना र बाहिरी मासु बिना कुनै सुरक्षा बिना।
अण्डा एक धेरै स्वस्थ खाना हो, जबकि सम्भावित खतरनाक। साल्मोनेला जीवाणु मध्ये एक हो जुन अण्डामा फैलन्छ र रोग तिनीहरू धेरै गम्भीर कारण। यसलाई रोक्नको लागि, यदि तपाईं घर बाहिर बाहिर अण्डाहरू लिन एक खाना तयार गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने यो राम्रो छ कि तपाईं रो जस्ता विकल्पहरू प्रयोग गर्नुहुनेछ। मेयोनेज तयार गर्नका लागि मात्र होईन, तर स्पेनिश ओमलेट्स र अन्य अण्डा-आधारित सॉसका लागि पनि।
धेरै राम्रो, धेरै स्वस्थ र बार्बेक्युका लागि उत्तम साथी, तर गर्मीमा सम्भावित खतरनाक। आलु भून्नका लागि, एल्युमिनियम पन्नी प्रयोग गरिन्छ र यसको भित्र उत्पादन हुन्छ तातो को स्रोत छ कि जब, फैलदा, ओसिलो हुन्छ। यदि तपाईंले आलुहरू भुट्ट्नुभयो र ती सबै उपभोग गरिएन भने, तिनीहरूलाई फ्रिजमा भण्डार गर्नुहोस् वा तिनीहरूलाई अर्को खानामा परिवर्तन गर्नुहोस्, जस्तो कि कुचिएको आलु।
यो धनी र स्वस्थ मासु सबैभन्दा नाजुक र खतरनाक हो, विशेष गरी ग्रीष्म andतुमा र यदि आवश्यक सावधानीहरू छैनन् भने। खाना पकाउनु भन्दा पहिले कुखुराको मासु कहिले पनि धुनु हुँदैन, हात र भान्साको भाँडाहरू जहिले पनि सफा हुनुहोस् मासु चलाउँदा। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, कुखुराको मासु खपत अघि जहिले पनि राम्रोसँग पकाउनु पर्छ.
गर्मीमा खाद्यान्न विषाक्तताबाट जोगिन उत्तम तरिका अति सावधानी अपनाउनु हो। कहिल्यै नबिर्सनुहोस् कि यो खानाको बारेमा हो, यस अवसरले कति रमाइलो गर्दछ। यदि तपाईं अन्य व्यक्तिहरूसँग हुनहुन्छ भने र तपाईं खानाको साथ सजिलै हराउन सक्नुहुन्छ, अन्य भाँडा छान्नुहोस् त्यो अग्रिम तयारी गर्न सकिन्छ। जोखिम लिनुहोस् र बेवास्ता नगर्नुहोस् कि खराब खाना मेमोरीले तपाईंलाई उत्कृष्ट गर्मीमा बिगार्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » स्वास्थ्य » स्वास्थ्य सल्लाहहरू » गर्मी को4सबैभन्दा खतरनाक खाना
सफा भाँडा माझ्ने4तरिकाहरू
जोडीमा भावनात्मक ब्ल्याकमेल